Mila Antenimieran’ny tanora ve i Malezia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2011 15:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Ελληνικά, македонски, Français, English
Nandritra ny “Fivorian'ny Tanora Iray Tapitrisa” notontosaina ny 27-29 Mey, no nanasongadinan'ny Praiminisitra Maleziana Najib Tun Razak fanapahan-kevitra enina vaovao, ka tafiditra anatin'izany ny fananganana ny Parlemantan'ny Tanora. Io Antenimiera voatondro io no toerana ijeren'ny fitondrana ny hevitry ny tanora mikasika ny politika, fitantanam-panjakana sy ny lohahevitra mikasika ny firenena hafa.
Nanao ahoana ny hevitry ny mpamaham-bolongana?
Point Blank Rambler nilaza fa mbola manan-javatra hafa tian-ko lazaina momba ny itondrana ny firenena ny tanora
Manantena aho fa tsy hisy fitongilanana [hosoka] ny Antenimieran'ny tanora; ka hofehezin'ny fitondrana tanteraka. Tahaka ny ataon'ny firenena mampihatra ny demokrasia dia manan-jo hanapa-kevitra momba ny fitantanana ny firenena ny olom-pirenena tsirairay avy, ka tafiditra amin'izany ny tanora, sa tsy izany?
Raha mamela ny tanora indray mihira hanapa-kevitra ny momba ny hitantanana ny firenena no tanjon'ny Antenimieran'ny tanora, dia tokony hanaja izany zo izany tsy misy faneriterena ry zareo.
Nilaza ny The Flying Kick fa ny mpanohitra no hanana fifehezana kokoa ny antenimieran'ny tanora:
Maro no nitehaka ilay hevitra raha nanambara ny hananganana ny antenimieran'ny tanora ho fomba iray hampidirana ny tanora Maleziana hahalala ny rafitra demokratika i Najib Abdul Razak. Ary ny faly indrindra amin'izany dia ny Mpanohitra.
Afaka mirehareha tamin'ny nananganana ny Antenimieran'ny tanora ihany ny UMNO (ny vondrona politika mitondra). Tsy handeha na ho aiza na ho aiza toy ny sampana isan-karazany tahaka ny KEDA, KESEDAR, KETENGAH, sns naorin'ny UMNO io fa ny avy amin'ny fanoherana no hifahy azy.
Ho tratran'izay efa nanjo ny hafa ihany koa ny Antenimieran'ny tanora. Mazoto ny mpitarika ny UMNO raha resaka fitazonana ny sezany no atao saingy tsy ho vitan-dry zareo ny adidiny. Handany fotoana amin'ny fanaovana zavatra hafa ry zareo, ka anatin'izany ny golf.
Mpanaraka ny motivationmy.com mizara ny eritreriny:
@Azziskandar hevitra tsara raha mbola tsy tafiditra politika loatra. Manantena fa hamoaka ny tena ilaina ny tanora fa tsy ny fandaharam-potoanany “manokana”
@shusshshussh: Hevitra tsara hifanakalozan-kevitra/ Hiadian-kevitra momba ny lalàna/hevitra hampihenana ny fisarahan-kevitra eo amin'ny taranaka roa mifampitohy ny Antenimieran'ny tanora. Fa tsy natao Hanaovan-dalàna.
Abdul Rahim (avy amin'ny Facebook): Hevitra tsara…mba ho tompon'nadraikitra kokoa ny parlemantera rahampitso, hanatrika ny fotoam-pivoriana rehetra, tsy hanao azy ho fanalan'andro ary handresy lahatra amin'ny zavamisy, fa tsy fihetseham-po….
Dhallan (avy amin'ny Facebook): Mino aho fa fanasongadinana dokambarotra fotsiny io. Amin'izao aloha dia efa voailika ilay volavolan-kevitra. Aza mieritreritra fa hisy io
@sherylhosulynn: Mieritreritra aho fa hevitra tsara io, saingy tokony avelany hiteny izay ao an'eritreritsika isika, fa tsy hoferany raha tiany ny hitsanganany!
@JFJuhari: Ny petra-kevitro voalohany dia ny fiangaviana hanala ny lalàna momba ny sivana. Misaotra tompoko
Ilhan Hikaru (amin'ny alalan'ny Facebook): Hahomby io raha mijery amin'ny alalan'ny lalàna silamo ry zareo
@zulfadly (from Brunei): Oaaoo. Nanao volavolan-kevitra momba izany ve ny fitondranareo? Mahagaga. Manantena fa hitranga izany. Ho fahombiazana tanteraka io raha tontosa. #YouthPower
Ary ankehitriny moa dia mbola tsy misy ny vaovao farany mikasika ity Antenimieran'ny Tanora ity.
Ny hajian-tsary dia nalaina avy amin'ny takelaka Flickr an'i amrufm izay mampiasa ny alalana CC License Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)